Madaxweynaha Somaliland Oo Kulan Casho ah la qaatay Guddida Ictiraaf Raadiska JSL, Cambaareeyeyna war-murtiyeedka ka soo baxay Shirkii Madaxda IGAD Ee Muqdisho. |
Madaxweynaha Somaliland Oo Kulan Casho ah la qaatay Guddida Ictiraaf Raadiska JSL, Cambaareeyeyna war-murtiyeedka ka soo baxay Shirkii Madaxda IGAD Ee Muqdisho.
Hargeisa(GNN):-Waxaanu u aragnaa mid la majara habaabiyay, oo aan ka turjumayn xaqiiqada dhabta ah ee xaaladda Somalia iyo Somaliland ka jirta.
Waxaanu u caddaynaynaa Beesha Caalamka in aanay metelin Jamhuuriyadda Somaliland shaqsiyaad Muqdisho laga cugtay
waxaa mudan in la ixtiraamo xaqa aayo ka tashiga iyo rabitaanka Shacbiga Somaliland
Waxaan ku martiqaadayaa Dalalka Midowga Africa in ay u soo diraan Somaliland Guddi Xaqiiqo Raadis ah oo ka gun gaadha raabitaanka Shacbiga Somaliland iyo sharciyadda ay ku dhisantahay Dal ahaan, siday u waafaqsantahay Axdi-qarameedka Xuduudaha Qaaradda Africa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu caawa qasriga Madaxtooyada kulan casho sharaf ah kula yeeshay Guddida Ictiraaf Raadiska Jamhuuriyadda Somaliland. Ujeedada kulan ayaa xambaarsan dardar gelinta iyo dedaalka ay guddidu ugu jirto ka midho dhalinta himilada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ka sugaayo beesha caalamka, taasoo loo igmaday inay si gaara uga shaqeeyaan guddidaasi, sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu fursadaasi uga faa’iidaystay kuna cambaaraynayay war-murtiyeedka ka soo baxay Shirka Madaxda IGAD ee ka dhacay Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Qodobka ka hadlaya Midnimada Somalia, waxaanu madaxweynuhu khudbadiisa ku yidhi: “Mudanayaal iyo Marwooyin,
Sida aynu la wada soconno, waxa Caasimadda Dalka Somalia lagu qabtay maanta Shir Sannadeedkii, Urur Goboleedka ay ku Buhoobeen Dalalka Bariga Africa ee IGAD. Ugu horreyn, waanu soo dhawaynaynaa in Shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho, waxaanu u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday. Dawladda Somaliland waxay soo dhawaynaysa dedaalka ay ugu jirto beesha caalamka iyo dalalka Midowga Africa sidii nabad loogu soo dabbaali lahaa Dalka Somalia, isla markaana loogu dhisi lahaa Dawlad adag oo hanata xilka iyo masuuliyadda saaran.
Waxaanu diyaar u nahay in aanu ka qayb qaadanno, isla markaana gacan weyn ka geysanno dedaaladda nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka aanu walaalaha nahay ee Soomaaliyeed. Waxaanu nahay dal iyo dad bisil oo aaminsan in dhibaatada gaadha ay annagana saamayn nagu leedahay. Sidaa darteed, waxaanu jecel-nahay nabaddooda iyo horumarkooda.
Waxaanu cambaaraynayna war-murtiyeedka ka soo baxay Shirka Madaxda IGAD ee ka dhacay Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Qodobka ka hadlaya Midnimada Somalia. Waxaanu u aragnaa mid la majara habaabiyay, oo aan ka turjumayn xaqiiqada dhabta ah ee xaaladda Somalia iyo Somaliland ka jirta. Waxaanu dunida u caddaynaynaa in Somaliland tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay Nidaamka Federaalka Dawladda Somalia, ee looga taliyo magaalada Muqdisho.
Waxaanu u caddaynaynaa Beesha Caalamka in aanay metelin Jamhuuriyadda Somaliland shaqsiyaad Muqdisho laga cugtay. Waxaanu u aragnaa maag iyo meel ka dhac qaawan, in magaca qarankayaga loo cimaamado cid aan shacbiweynaha Somaliland dooran, ama aanay ceelalyo u diran. Ummadda Somaliland waxaa matala oo kaliya, kana mas’uul ah, madax ku timi doorasho xor iyo xalaal ah (Xukuumad iyo Baarlamaan).
Waxaan u caddaynayaa Dalalka Midowga Afrika, Midowga Yurub, Urur Goboleedka IGAD, Maraykanka, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka iyo dhammaan Dalalka ku Midoobay Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa arrimaha hoos ku xusan:-
1. Somaliland waa waddan leh taariikh dheer oo soo jiray ilaa 1887, isla markaana leh, xuduudo caalamiya oo la aqoonsan yahay, kana mid ahaa maxmiyadihii Ingiriiska.
2. Somaliland waxay ahayd dal gaar ah, oo xornimadiisii ka qaatay 26 June, 1960-kii Dawladdii Ingiriiska. Waxaannu ku biirnay lana midawnay 1-dii July dalkii Soomaaliya oo Talyaanigu gumaysan jiray.
3. Somaliland waa waddan isaga oo xor ah, waddan kale oo xor ah ku biiray, ma’aha markii ugu horreysay oo laba waddan oo Qaaradda Africa ka mid ahi isku darsadeen, haddana kala noqdeen.
· Masar iyo Suuriya, waxay isku darsadeen 1958, waxay kala noqdeen 1961-kii.
· French Sudan iyo Senegal, waxay isku darsadeen 1960-kii, waxay kala noqdeen 1960-kii.
· Gambia iyo Senegal, waxay isku darsadeen 1981-kii, waxay kala noqdeen 1989.
4. Shacbi-waynaha Somaliland waxay si cad %53 ku diideen June, 1961-kii aftidii loo qaaday dastuurkii cusbaa ee loo sameeyey dalkii lagu midoobay ee la magac baxay Jamhuuriyaddii Soomaaliya, oo haatan meesha ka baxday.
5. Muddo yar ka dib, markii Shacbiga Somaliland garwaaqsadeen inay ku hungoobeen midnimadii, waxay Saraakiishii ka soo jeeday Gobollada Waqooyi sameeyeen December, 1961-kii inqilaab dhicisoobay, kaas oo ujeeddadiisu ahayd inay dib u soo celiyaan Xornimadii Somaliland ee luntay.
6. Somaliland rubuc qarnigii u dambeeyey kama qayb qaadan shirarkii kala duwanaa ee dib u heshiisiinta Soomaaliya marnaba, maantana qayb kama nihin Shirarka Somalia Dawladda loogu dhisayo.
Sidoo kale, Somaliland kama mid aha Nidaamka Federaalka yegleesha ah ee ay ku midoobeen maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya, kuwaas oo saxeexay, isla markaana ogolaaday heshiisyada iyo Axdiga (Road map-ka) ay ku dhisan tahay Dawladda Federaalka Soomaaliya.
7. Somaliland waxay xornimadeedii la soo noqotay 18-kii May 1991-kii, ka dib markii ay Salaadiinta, Garaadada iyo Wax-garadka Beelaha Waqooyi shir isugu yimaadeen Magaalada Burco, go’aan midaysanna ay ku gaadheen in madax bannaanidoodii ay dib ula soo noqdaan.
8. Maaha markii u horreysay ee Dadka Somaliland dareenkooda iyo rabitaankooda muujiyaan, Shacbiga Somaliland waxay bishii May, 2001-dii kalsooni cod buuxa %97.7 ku taageereen aftidii loo qaaday dastuurka cusub ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo Qadiyadda Gooni-isu-taaga dalka.
9. Somaliland waa dal buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa wadan madax-bannaan, oo leh Dawlad (Xukuumad iyo Baarlamaan sifo dimuqraadiya loo doortay), Xuduud Sugan oo Caalamiy ah, Cumlad iyo Calan u gaar ah.
10. Madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland waa mid lama taabtaan ah, mana jiro haba yaraatee hammi iyo himilo salka ku haysa in dib loola midoobo Dalkii aanu ka go’nay ee Somalia.
Arrimahani waxay daliil cad u yihiin in jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland aanay ahayn wax ku dhisan riyo iyo dhalanteed, balse ay tahay mid ka turjumaysa xaqiiqada dhabta ah iyo go’aanka shacbigani qaatay. Sidaa darteed, waxaa mudan in la ixtiraamo xaqa aayo ka tashiga iyo rabitaanka Shacbiga Somaliland, waxaanan bulshada caalamka ugu baaqayaa inay garwaaqsadaan xaqa sharci iyo ka bini’aadannimo ee Shacbiga Somaliland u leeyihiin inay noqdaan qaran madax-bannaan.
Qarannimada iyo Madax-bannaanida Somaliland waxay dan u tahay nabad-galyada, deganaanshaha, geedi-socodka dimuqraadiyada, ganacsiga iyo horumarka Bariga Africa iyo ka caalamka intaba. Madaxda Urur Goboleedka IGAD iyo Dalalka Midowga Africa intooda kaleba, waxaan ka codsanayaa in ay qadiyadda Somaliland miiska keenaan, isla markaana ajandayaasha shirarka dambe ku daraan. Waxaan ku martiqaadayaa Dalalka Midowga Africa in ay u soo diraan Somaliland Guddi Xaqiiqo Raadis ah oo ka gun gaadha raabitaanka Shacbiga Somaliland iyo sharciyadda ay ku dhisantahay Dal ahaan, siday u waafaqsantahay Axdi-qarameedka Xuduudaha Qaaradda Africa.
Ugu dambeyn, waxaan Shacbi-weynaha Somaliland ugu baaqayaa gudo iyo dibed meel kasta oo ay joogaan:
· in ay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta qarannimadooda iyo qadiyaddooda.
Waxa munaasibadaasi khudbado ka jeediyey Wasiirka Arrimaha Dibeda Somaliland, Dr. Sacad Cali Shire, Marwo Adna Aadan Ismaaciil, Gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha Wakiilada Mudane Baashe Maxamed Faarax, Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID, Eng. Faysal Cali Waraabe, iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha wakiilada Mudane Siciid Jaamac Cali,